बाथरुममा नुहाइरहेकी एक महिलालाई कुकुरले गर्यो यस्तो व्यवहार ! तर कुकुर बन्यो हिरो ! – Medianp
बाथरुममा नुहाइरहेकी एक महिलालाई कुकुरले गर्यो यस्तो व्यवहार ! तर कुकुर बन्यो हिरो !
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज २५, २०७५१६:२८0
एजेन्सी,२५ असोज । आफ्नै घरमा पालेको कुकुरले बाथरुममा नुहाइरहेकी युवतीलाई टोकेको छ । कुकुरले टोक्नुको रोचक तथ्य पछि थाहा भयो कुकुरले टोकेको नभएर उनलाई बचाउने प्रयास गरिरहेको थियो । उनलाई कुकुर मन पर्दैनथ्यो तर छोराछोरीको जिद्दीले पालेको कुकुर अहिले हिरो बनेको छ । यो घटना वाशिङटनको हो ।
म्युजिक स्टिममा ठूलो आवाजमा गीत बजाएर नुहाउँदै गरेकी त्ी महिलालाई एक्कासी कुकुर गएर हातमा समाएर तान्दै ल्यायो । तर उनले कुुकुरले टोकेको सम्झे धपाउने कोशीस गरिन् तर कुकुरले छोडेन् । पछि कुकुरको इसारा बुझेर भान्सा कोठा तिर कुकुर पछि पछि गइन् । उनको घरमा आगो लागेको थियो । आगो बढेर बाथरुममा आइसकेको थियो । बाथरुम सम्म आगो आइपुग्दा ती महिला र कुकुर बाथरुममा नै फसे । तर कुकुरले आफुहरु निस्कने बाटो पत्ता लागएर बाहिर निस्कियो ।
अगाडी बढ्दै गरेको कुकुर ती महिला आयन की आइनन् भनेर फर्केर हेर्दै बाहिर सुरक्षित स्थान सम्म कुकुरले ति महिलालाई ल्यायो । घरबाट बल्ल तल्ल निस्केकी ती महिला निकै डराएकी थिइन् । उनले आफ्नो कार पनि घरसँगै राखेकी थिइन् कारमा आगो लाग्ने भयो भनेर कारको चाबी लिन भित्र जान लागेकी ती महिलालाई भित्र जान नदिएर कुकुर ढोकामा नै बस्यो । यहि बेलामा घर भित्र आगो लागेको कारण बिस्फोटक भयो । अन्तमा उनले बुझिनकी कुकुरलाई घरमा विस्फोट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो ।
काश्मिरमा दोहोरो गोली हानाहान, दुई आतङ्ककारीको मृत्यु
के तपाई नियमित घाम ताप्नुहुन्छ ? यस्ता छन् ८ फाइदाहरु (जान्नुस् )
गाँजा खान सुनसान घरमा गएका व्यक्तिहरुको भित्रको दृष्य देख्दा उड्यो होस् ! आखिर के थियो त्यो घरमा ?
२५ वर्षिय एक महिलाले एकैपटक जन्माइन् ७ बच्चा हेर्नुहोस् (तस्वीर सहित)